FAMPIANARANA F-8 nino ny Crusader FSX & P3D - Rikoooo
F-8 niasa tamin'ny Crusader FSX & P3D
Add-on Malagasy Bible2
Downloads 20 044
Original by Virtavia. Niova fo FSX teratany miaraka amin'ny fanavaozam-baovao avy amin'i Henk Schuitemaker. Mamaritra an'i Danny Garnier
Nohavaozina taminy 12 / 06 / 2019:
- Vaovao FSX tavoahangy glasy ary sarintany mampihomehy ho an'ny ivelany
- Mizara ny habaka fantson-dradradradrà VC ho an'ireo modely efa ela
- Fiaramanidina azo afindrafindra
- Azo entina amin'ny fampidirana azy ireo fitaovam-piadiana FSX Lozam-pamindra
- Rehefa manomboka ny BOOM!
- Ny fitaovam-pitrandrahana alikaola vaovao ary ny elatra dia mameno ny làlan-dàlana fx
- Fanamarinana Kneepad fanampiny izay manazava ny fametahana fanolorana fanasana.
- Sakafo vaovao vaovao
- Miara-miasa Prepar3D v4
- Panel.cfg efa vonona RFN Carrier Gauge
Ity fonosana ity dia ny mpividy ala Crusader Alphasim / Virtavia ankehitriny maimaim-poana toy ny freeware. Nisy fiovana natao tao amin'ny fiaramanidina.cfg sy ny Panama 2D / VC mba hifanaraka amin'ny FSX/P3D. Repoblika / modely: US Navy F-8C + F-8J / Aeronavale F-8E (FN) / USMC F-8K.
Ny Crusader F-8 (voalohany 8U) dia mpamono supersonika natsangan'ny Vought ho an'i Etazonia sy ao anaty fiaramanidina fiaramanidina. Misy karazana lozam-pifamoivoizana sy onjampeo misy elanelana misy azy. Na eo aza ny fiampangana fanampiny noho ny fitaovan'ny fitaovam-piaramanidina, dia mampiseho ny fahombiazany amin'ny maha-mpiara-monina azy, Amerikana Avaratra F-100 Super Saber. (Wikipedia)
Mpanoratra: Original by Virtavia. Niova fo FSX teratany miaraka amin'ny fanavaozam-baovao avy amin'i Henk Schuitemaker. Mamaritra an'i Danny Garnier